Ikhukhamba yaselwandle yePeptide Powder-kwiFektri yoMvelisi
Ikhukhamba yaselwandle i-Peptide powder yipeptidi ezincinci zeemolekyuli ezifunyenwe kwi-hydrolysis kunye nokucocwa kweekomkomere zaselwandle yi-protease ikakhulu zii-collagen peptides, kunye nee-neuropeptides, i-glycopeptide kunye neepeptide zokulwa neentsholongwane.
Ikhukhamba yolwandle iPeptide Powder yevidiyo
Ukucaciswa kwePowuda yePowide yePowydide yolwandle
Igama lemveliso Ikhukhamba yoLwandle iPeptide powder
umbala Mthubi okanye mthubi mnyama
Yintoni ulwandle ikhukhamba yePeptide powder?
Ikhukhamba yaselwandle i-Peptide powder inezibonelelo ezilungileyo ekufunxeni ngokukhawuleza kunye nenqanaba lokusetyenziswa okuphezulu, ikwanokunyibilika okuhle, uzinzo kunye ne-viscosity ephantsi.
Okwangoku, i-Sea Cucumber Peptide powder ikakhulu isetyenziselwa ukhathalelo lwempilo kunye nendawo yokutya esebenzayo.
Zithini izibonelelo zeCucumber Sea Peptide powder?
Ikhukhamba yolwandle umgubo wepeptide unokunyusa ukunyamezeleka komzimba, ukhuthaze ukugcinwa kwesibindi glycogen, ukukhawulezisa umzimba we-urea nitrogen metabolism, ngenxa yoko unefuthe lokulwa nokudinwa.
Ikhukhamba yolwandle yepeptide powder inokuphucula amandla e-macrophage e-mononuclear, iiseli zomzimba kunye neeseli zomzimba, ngaloo ndlela kuphuculwe ukhuseleko olomeleleyo lomzimba womntu.
Cothisa ukwaluphala kolusu kwaye uyenze mhlophe
Ikhukhamba yolwandle i-peptide ine-anti-oxidation function, enokuthi isuse ngokufanelekileyo ioksijini esebenzayo yeeradicals kunye nehydroxyl radicals, ukukhuthaza ukuhlanganiswa kwe-collagen kwi-dermis. Ke inefuthe lokulibazisa ukwaluphala kolusu. Kwangelo xesha, i-peptide yolwandle lwekhukhamba inokuthintela kakhulu imveliso ye-melanin kwiiseli kwaye ineziphumo ezimhlophe.
Ukuthintela iiseli zomhlaza
Ikhukhamba yolwandle i-peptide inemisebenzi ebanzi ye-antibacterial kwaye inokuthintela kakhulu umhlaza wesisu kunye neeseli zomhlaza wamabele.
Ikhukhamba yolwandle i-peptide inokukhusela ngokufanelekileyo iiseli ze-vascular endothelial ezonakaliswe yi-lipid peroxide, ukugcina ukusebenza komzimba okuqhelekileyo kweeseli ze-vascular endothelial, kunye nokunciphisa umngcipheko we-atherosclerosis.
Ikhukhamba yolwandle i-peptide powder ingalonyusa izinga lokuthintela i-ACE kwi-vivo kwaye inciphise ngempumelelo i-angiotensin I, yiyo ke enokunciphisa uxinzelelo lwegazi.
 Iziphumo zokuchasana nokudinwa kweeMolekyuli ezincinci zoLwandle lweeKhukhamba zepeptidi
 Iziphumo zeCucumber yoLwandle iPeptide kuMmiselo woMzimba kunye nokuKwazi ukudinwa kwiPuku.
 Iipropati ze-Biochemical kunye ne-Collagen Peptide Umsebenzi we-Cucumber Collagen yolwandle.
 Ukuthelekisa isifundo kwiMpembelelo yoKhuselo lweeNdidi ezimbini zoLwandle lweeKhukhamba ze-Collagen Peptides kwii-Vascular Endothelial Cell.
 Inkqubela phambili yoPhando ekusebenzeni kweBhayiloji yoLwandle lweeKhukhamba zepeptidi.